အဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားမှာတော့အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားမှာတော့အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီး
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 21/02/2020)
ကမ်ဘာပျေါတှငျအရှည်ဆုံးမီးရထားခရီးအလွန်ရှည်လျားများမှာ! ဤရွေ့ကားခရီးရက်ပေါင်းများစွာ ယူ. မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဖုံးကိုလို့ရပါတယ်.
ဒါကြောင့်, ဒီမှာအရှည်ဆုံးအတွက်ယူသောခရီးများမှာ ဥရောပ, အာရှတိုက်, သြစတြေးလျ, နှင့်အမေရိကန်.
1: Trans-Siberian Express ကိုအရှည်ဆုံးမီးရထားခရီးဖြစ်ပါသည်
အဝေးသင်: 5,722 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း:6ရက်ပေါင်း +
The longest rail journey in the world starts in Moscow and finishes in Vladivostok. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကျော်ကြာ6ဖြည့်စွက်ရန်ရက်ပေါင်း. ဒီအပေါ်ခရီးသည် ဥရောပခရီး မျိုးစုံအချိန်ဇုန်မှတဆင့်သွားပါ. ဒီခရီးစဉျတှငျရှုခင်းများ include the Ural တောင်တန်း နှင့် ရေကန် Baikal. ဒီလမ်းခရီးဘို့ရထားတိုင်းထွက်သွား 48 နာရီ.
ရေကန် Baikal: ကမ္ဘာ့အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်
2: အရှေ့ & အရှေ့တိုင်း Express ကို
အဝေးသင်: 1,200 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း: 3+ ရက်ပေါင်း
ဤ ခရီးခရီးသွားမှတ်တမ်း ဘန်ကောက်မြို့ကနေစင်္ကာပူမှအရှေ့တောင်အာရှတဆင့်. The train stops at River Kwai and kuala Kangsar. ခရီး၏ Duration: ဖြစ်စေဖြစ်ပါသည်3သို့မဟုတ်4ရက်ပေါင်း. ထို့အပြင်, ခရီးအများအားဖြင့်ယူ တနင်္ဂနွေအရပ်တို့ကို. ထို့အပွငျ, အဆိုပါနေရာထိုင်ခင်း ပုဂ္ဂလိကသည်နှင့်ကြင်အလှဆင်. အဆိုပါနေရာထိုင်ခင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကြောင့်ထိုသို့တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးသင့်တော်ပါတယ်.
အဝေးသင်: 2,700 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း:3ရက်ပေါင်း
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အဘယ်သူမျှမရှိ ဝိုင်ဖိုင် ဒီ Transcontinental ခရီး. ဒါကြောင့်, ရှုခင်းမှာရှာဖွေနေအချိန်ဖြုန်းဖို့ပြင်ဆင်ထားဖြစ်. ယင်းကြောင့်, တောင်များ, သစ်တောများ သငျတို့သမြင်ရပါလိမ့်မည်ကိုအခြားကနေဒါရှုခင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါခရီးအတွက်စတင်သည် ဗန်ကူးဗား နှင့်တိုရွန်တိုအတွက်အဆုံးသတ်. အဆိုပါအဆင်ပြေအိပ်ပျော်ကားများခံစားကြည့်ပါ, သငျသညျမင်များ၏ပုံရိပ်ကိုတကွက်ရနေတုန်း, သမင်များနှင့်ပင်ဝံ.
အဝေးသင်: 2,348 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း: 51 နာရီ
ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်အရှည်ကြာဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်ခရီးအများဆုံးမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါခရီးရှေ့ဆောင်ဖုံးလွှမ်း, အဆိုပါကျောက်တောင်, နှင့်ချောက်ကြီးများ. The key stops on this journey are Denver, Salt Lake City,, Reno, နှင့် Sacramento.
5: အိန္ဒိယပစိဖိတ်: ပါ့သမှဆစ်ဒနီ (သြစတြေးလျ)
အဝေးသင်: 2,704 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း: 65 နာရီ
ဤသည်အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီးကမ္ဘာပေါ်မှာဖြောင့်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်း၏အရှည်ဆုံးလမ်းပိုင်း features. ပထမဦးစွာ, ခရီးသည်အတှေ့အကွုံရ ရဲ့ width သြစတြေးလျ. ထို့အပြင်, ရှုခင်းရေတံခွန်များလည်းပါဝင်သည်, သစ်တောများနှင့်အပြာရောင်တောင်များ. သောကြောင့်အလျား၏, ဒီအပေါ်အများအပြား key ကိုမှတ်တိုင်များရှိပါတယ် ခရီးစဉ်. The stops include ကျိုးဟေးလ်, Adelaide, Barossa ချိုင့်, Kalgoorlie, ချက်ပြုတ်, နှင့် Rawlinna. ရထားလက်မှတ်တွေ ဒီလမ်းခရီးဘို့စျေးနှုန်းများမှာကျော် စတင်. နှင့်အတူစျေးကြီးတယ် $600.
6. Vivek Express ကို: Kanyakumari မှ Dibrugarh (အိန္ဒိယ)
အဝေးသင်: 2,633 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း: 82 နာရီ
အလားတူပင်အိန္ဒိယပစိဖိတ်မှ, ဒီရထားအိန္ဒိယအတွက်အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီးဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အိန္ဒိယတစ်ခုလုံးကိုအရှည်သွားရောက်ကာနှင့်တစ်ခုရှိပါတယ်သောကြောင့် ပျှမ်းမျှမြန်နှုန်း ၏ 32 တစ်နာရီကို KM. ဒီရထားအခြားရှည်လျားသောမီးရထားခရီးလက်မှတ်တွေမတူဘဲမှာ start $10.
7: ပဲရစ်-မော်စကိုအရှည်ဆုံးမီးရထား Express ကို
အဝေးသင်: 1,998 မိုင်
ရှည်ကြာခြင်း: 48 နာရီ
ဒီရထားအရှည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် Trans-ဥရောပ route it only takes2ဖြည့်စွက်ရန်ရက်ပေါင်း. အဆိုပါမီးရထားမှအရွက် ပြင်သစ်မြို့တော် နှင့်ရုရှားမြို့တော်ရောက်ရှိ. ဒီခရီးရုစ်မှတဆင့်သွားရောက်ကာသောကြောင့်သင်တစ်ဦးလိုအပ်ပါလိမ့်မည် ဘယ်လာရုစ်ဗီဇာ ခရီးသွားရန်. ထို့အပြင်, သငျသညျရုရှားကရိုက်ထည့်ရန်ဗီဇာလိုအပ်.
တစ်ဦးရထားကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်နှင့်သင်၏အရှည်ဆုံးမီးရထားခရီးဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
ရှည်လျားသောမီးရထားခရီး booking အချိန်အနည်းငယ်ကြာမနေသင့်. ဒါကဘာကြောင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးရှိတယ်တဲ့ရထားဖြစ်ပါသည် အမြန်လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို.
ယခုကြှနျုပျတို့၏ website မှ Login နှင့်ယူ3ယင်းကိုရှာဖွေမိနစ် စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် သင့်ရဲ့လမ်းခရီးဘို့. လက်မှတ်တွေကရက်ဒစ်ကတ်များနှင့် Real-time ဘဏ်လုပ်ငန်းငွေပေးချေမှုနှင့်အများအပြားပိုပြီးရွေးချယ်စရာအပေါ်သုံးပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည် တစ်ဦးကရထား Save က်ဘ်ဆိုက်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flongest-train-journeys-world%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ru သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ja ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#russia #singapore #thailand သြစတြေးလျ longtrainjourneys trainjourney ရထားခရီးသွား travelfrance